Abe EFFSC bagcwale umgaqo ngoluka Mlungisi Madonsela﻿ – Sivubela intuthuko Newspaper
UMlungisi Madonsela wadutshulwa wabulawa ngesikhathi abafundi base DUT bebhikisha ngomhlaka 5 Febhruwari 2019.
Abafundi base Durban University of Technology (DUT) nabanye bakwezinye izikhungo baphume ngobuningi babo beyobamba imashi ebeyiholwa umkhandlu wezitshudeni i Economic Freedom Fighters Student Command (EFFSC) beyozwakwalisa izikhalo zabo ngokungaboshwa kowabulala uMlungisi Madonsela.
Ngomhlaka 5 Agasti bekuphela izinyanga eziyisithupha umfundi wase DUT uMlungisi Madonsela abaluwa ngesikhathi abafundi ababebhikisha bebhekene ngeziqu zamehlo namaphoyisa nonogada abanenkontileka nenyuvesi.
UMhlanganisi wemashi u Sandiso Buthelezi uthe inhloso yale mashi ukuyothola izimpendulo ngodaba lokuhamba kancane kohlelo lokuboshwa kwababulali baka Madonsela, uthe uhlu lwezikhalo balubhekise ophikweni lezokushushisa i National Prosecuting Authority (NPA) no Khomishana wamaphoyisa esifundazweni.
“Sihlele ukuthi imashi iqale e Curries Fountain ize iyophela e City Hall, uhla lwezikhalo zethu sizolunikezela i NPA naku Khomishana wamaphoyisa esifundazweni. Sifuna umthetho udlale indima yawo ngodaba lokubulawa kuka Mlungisi Madonsela, asihambisani nesinqumo se NPA sokuthi angabi bikho oshushiswayo ngenxa yokushoda kobufakazi. Bonke laba abathintekayo ekubulaweni kuka Mlungisi kumele bajeze kanzima,” kusho uButhelezi.
Ngaphambi komhlaka 5 Febhruwari nokuwusuku abulawa ngalo uMadonsela, abafundi bezikhungo ezahlukahlukene Kwa Zulu-Natali babamba imibhikisho bekhala ngokunganeliseki ngezimo abafunda ngaphansi kwazo.
Ezinye zezinto ezaziphezulu ohlwini lwezikhalo zabafundi izindawo zokuhlala ezingekho esimeni, ukwentuleka koxhaso luka Hulumeni, kanye nezokuphepha ezikhungweni zemfundo ephakeme.
UMadonsela wayeyingxenye yezitshudeni ezibalelwa ku 30 ezazifuna ukungena ngo dli emahhovisi enyuvesi. Abanye abasebenzi bakule nyuvesi bathola imihuzuko kule mibhikisho.
Ezinsukwini ezimbalwa kubulewe uMadonsela, i DUT yahlonza umhlaka 5 Febhruwari njengosuku lokukhumbula uMlungisi Madonsela okuzokwenzeka minyaka yonke. Kulindeleke ukuthi kuqale ngowezi 2020 ukuhlonishwa kwalolu suku.
UButhelezi uthe izinhlangano zomphakathi, abafundi bezinye izikhungo kanye namabandla ehlukene azoba yingxenye yalo mbhikisho.